एनएमबि बैंकको उर्जा ऋणपत्र आजदेखि बिक्री खुल्ला, व्याजदर कति ? - Arthasansar
एनएमबि बैंकको उर्जा ऋणपत्र आजदेखि बिक्री खुल्ला, व्याजदर कति ?
आइतबार, ०९ जेठ २०७८, ०८ : १४ मा प्रकाशित
एनएमबि बैंकले डेढ १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र आज (जेठ ९ गतेदेखि) निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ । बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँको दरमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको १५ लाख इकाई ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ९ लाख इकाई बैंकले आफ्नै पहलमा अन्य संघसंस्थालाई बिक्री गर्नेछ भने बाँकी ६ लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्नेछ ।
लगानीकर्ताले उक्त ऋणपत्रमा जेठ ९ गतेदेखि छिटोमा जेठ १२ गते र जेठ २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ इकाईदेखि अधिकतम ८ लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।